HORDHACA: Kulanka maanta dhex mari doono kooxaha Jeenyo Vs Heegan – Gool FM
(Soomaaliya) 12 Maarso 2019. Kulan xiiso badan ayaa galabta ka dhici doono garoonka Banadir Stadium kaa oo dhaxmari doono kooxaha Jeenyo iyo Heegan, ciyaartan ayaa ka tirsan Horyaalka Somali Premier League, waana kulankii 24-aad ee laga dheelayo Horyaalka.
Kooxahan ayaa dheeli doono kulamadii 5-aad ee horyaalka Kal ciyaareedkan.
Kooxda kubadda cagta Jeenyo kulankii ugu dambeyay waxey guul daro qaraar kala soo kulantay Naadiga Horseed kadib markii lagu lagday 3-0, halka kooxda Heegan ciyaartii ugu dambeysay qasaaro kala soo kulantay Wiilasha Muqdisho City Club xili loogu adkaaday 1-0.
Saddexdii kulan ee ugu dambeyay ay labadan kooxod isku arkan horyaalka hal kamid ah waxaa badisay kooxda Heegan, sido kale Jeenyo ayaa mid kamid ah adkaatay halka kulanka kale ay ku kala baxeyn bar baro, taas oo ka dhigan in ay kala qaateyn dhibcaha marka aan ka fiirino saddexdii dheel ee ugu dambeysay horyaalka.
Kooxda Heegan ayaa ku jirta kaalinta 5-aad iyado leh 6-dhibcood halka Jeenyo ay fadhiso kaalinta 9- aad ee kala sareynta horyaalka iyado leh 3-dhibcood.
Naadiga Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee Heegan kulanka galabta waxaa kaliya ka maqnaan doona kabtankooda Cumar Qaxtaani kaaso oo wali dhaawac ah.
Wiilasha Jeenyo Kulanka galabta wax dhaawac ugu maqan ma jiro dhaaman taam aye u yihiin in ay si wadajir ah u wajahan kooxda Heegan.
Kooxaha: Jeenyo fc Vs Heegan Fc